အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှပ်စစ်ငါးရှဥ့်ရက်စွဲကိုအများဆုံးတုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "ဒီအသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှပ်စစ်ငါးရှဥ့်ရက်စွဲကိုအများဆုံးတုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် - BGR
အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှပ်စစ်ငါးရှဥ့်ရက်စွဲကိုအများဆုံးတုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် - BGR
သငျသညျအမေဇုံမိုးသစ်တောထဲမှာသို့ကျဆင်းလာကြုံတွေ့ရစေခြင်းငှါ, အပေါငျးတို့သတသတ္တဝါ, လျှပ်စစ်ငါးရှဥ့်ကိုဆက်သွယ်မှဖြစ်နိုင်ဆုံးသောနာကျင်အစည်းအဝေးများတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကလူသားမြားသညျအတူဒုက္ခသို့ရတဲ့များအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပေမယ့်ခြိမ်းခြောက်လျှင်, သူတို့သည်လည်းနီးကပ်စွာချဉ်းကပ်ရာကိုမဆို၏ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်ပေးပို့နိုင်စွမ်းရှိသည်။
အခုတော့တစ်ဦးမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့မျိုးစိတ်, Electrophorus voltai အစဉ်အဆက်ကိုလေ့လာအခြားမည်သည့်ငါးရှဥ့်ထက်အများကြီးပိုအစွမ်းထက် jolt ထုတ်လုပ်မှတ်တမ်းများကိုဖဲ့။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့, ပို. ပင်တုန်လှုပ်ဖွယ်အဆိုပါငါးရှဥ့်ကိုယ်နှိုက်ကထက်ဒီမျိုးစိတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့အအမည်မသိသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
အမေဇုံမိုးသစ်တောကြီးတစ်ခုဧရိယာသည်နှင့်လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပေမယ့်အများကြီးမသိရမျိုးစိတ်ဟာမိုးသစ်တောတှငျနထေိုငျ, ဒါပေမယ့်ငါးရှဥ့်ရဲ့ဒီမျိုးစိတ်အသစ်ဖုံးကွယ်ဖို့ဒီဇိုင်းမပေးပါ။ ထုတ်ဝေအသစ်တစ်ခုဆောင်းပါးထဲမှာသုတေသီများအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း သဘာဝတရားဆက်သွယ်ရေး သတ္တဝါသင်ဘယ်မှာကြည့်ဖို့သိကြတခါဆိုတာတွေ့ရဖို့သူတို့ကိုအတော်လေးလွယ်ကူစေသည်ရသောရှည်လျား 8 မီတာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
သို့သျောလညျး, အရွယ်အစားဒီအထူးငါးစေသည်တစ်ခုတည်းသောအရာမျှမက, bioelectricity ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကို generate ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်မဆိုအခြားမျိုးစိတ်အားဖြင့်ပွိုဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ငါးရှဥ့်မျိုးတစ်ချိန်ကကောင်းစွာမသိ, Electrophorus electricus 650 နှိုင်းယှဉ် 860 Volts အထိထုတ်လုပ်ရန်, သို့သော်ဤအချည်းနှီးဖြစ်၏နိုင်ပါတယ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီး volts voltai .
တိရစ္ဆာန်များကာကွယ်ရေးနှင့်အမဲလိုက်အဘို့မိမိတို့ထူးခြားသောစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါစျေးမှာဖမ်းရန်သူတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်လုယူရာဥစ္စာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နိုင်ပြီး, သူတို့ကြောက်လန့်လျှင်သူတို့ကအလွယ်တကူမှလွတ်မြောက်ရန်ခွင့်အလားအလာသားကောင်တွေကို excite ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။
ဟော့စပေါ့, သဘောသဘာဝရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့ငွေသား၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုအကြံပြု "ဒါဝိဒ်သည်ကားလို့စ် Santana, လေ့လာမှု၏ပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာကဆိုပါတယ်, ။ ထို့အပြင်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအားပေးသောဆေးဝါးနှင့်ဇီဝနည်းပညာ, ကဲ့သို့သောအခြားသိပ္ပံနည်းကျလယ်ကွင်း, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်, ဘရာဇီးသုတေသီများအကြားမိတ်ဖက်နှငျ့ပတျသကျသောလေ့လာမှုများအဘို့အရေးကြီးပါတယ် ငါတို့ကိုနှင့်အခြားတိုင်းပြည်အုပ်စုများအကြား။ အဆိုပါဒေသ၏ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ။ "
Image ကိုရင်းမြစ်: Gerard Lacz / Shutterstock
တွားသွားတစ်ချိန်ကမြောက်အမေရိကမိုဃ်းတိမ်ကြီးစိုးခဲ့ကြသည်ပျံသစ်ရုပ်ကြွင်းထုတ်ဖော်ပြသ - BGR
Hubble ဝေးသော exoplanet ပတ်လည်ရှိရေနွေးငွေ့တွေ့ရှိထားပါတယ် - BGR
အိန္ဒိယ: | Mamata Banerjee ပြည်ထောင်စုပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ Amit Shah ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အိန္ဒိယသတင်း
Google Chrome က: ရှာဖွေတွေ့ရှိမှားယွင်းသောနှင့်အန္တရာယ်ရှိကြော်ငြာ blockers
Youtube ကို: စိတ်အားထက်သန် WAGS ။ Genting - Saint-Etienne: Pho အတွက်နှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့များအမျိုးသမီးကစားသမားများရှာဖွေတွေ့ရှိ
VIDEO - မင်းသားဝီလျံကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏သမ္မတသစ်အစပျိုးဆြေးြေိံး
Mauritania: Biram ဒါး Abeid ပြင်သစ်တွင်တည်းခို - JeuneAfrique.com
ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ်231
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,658
TECH & Telecom2,086